Iyo nyowani A15 Bionic chip muiyo iPad mini ine mashoma simba | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 18/09/2021 18:00 | iPad
Iyo iPad mini yaive imwe yemidziyo yakaratidzwa mazuva mashoma akapfuura uye kuti vakapa kushamisika mukugadzwa kweshoko rakakosha. Iine dhizaini nyowani uye kugadzirisa kwemukati mayo neiyo imwechete A15 Bionic chip iyo iyo iPhone 13. Zvisinei, mabhenji ekutanga ari kuoneka anoratidza izvo processor processor kumhanya iPad mini yaderedzwa uye saka kuita kwakadzikira zvishoma pane iyo iPhone 13.
iPhone 13 uye iPad mini inogovera A15 Bionic asi nemasimba akasiyana
Ma processor senge A15 Bionic ane akasiyana zvinhu mukati senge CPU. Iyo CPU iri pamusoro pekugadzirisa mirairo kubva kumapurogiramu akasiyana, mashandiro uye masevhisi eiyo inoshanda sisitimu. Iko kumhanya kunoitwa mirairo iyi kunotendera kupa mufananidzo wechokwadi kana zvishoma wechokwadi wekuita uye simba re processor. Semuenzaniso, iyo CPU yakavharwa pa3,2 GHz ichagadzira 3.200 bhiriyoni macircuits pasekondi.
Yokutanga bechmark iPad mini 2021 uye iPhone 13 kuburitsa show maitiro akasiyana aine imwechete A15 Bionic chip. Iyo iPad mini inopa mapoinzi e1595 mapoinzi neimwe musimboti uye makumi mana nemakumi mana emapoinzi pamwe nemulticore bvunzo. Muchiitiko cheiyo iPhone 4540, 13 mapoinzi anowanikwa nepakati uye mune multicore mamakisi e1730. Izvi zvinoreva kuti zvinokwana iyo mini mini iri pakati pe2 ne8% zvishoma zvine simba zvishoma pane iyo iPhone 13.
Iyo nyowani iPad mini inowedzera ndangariro yayo ku4 GB
Chikonzero chikuru cheiyi data iri mune yekumhanya wachi (kana frequency) yeiyo A15 Bionic chip sezvatakakurukura pakutanga. Iyo iPhone 13 yakavharwa pa3,2 GHz nepo iyo yeiyo iPad mini inogumira kune 2,9 GHz. Uyu mutsauko unogona kutsigira kuderera uku kwesimba re processor.
Zvisinei, Apple inoziva kukwana kweA15 Bionic uye zvakare inoziva iko kushandiswa kunopihwa kune ese ari mairi iPhone uye iyo mini mini. Naizvozvo, isu tinonzwisisa kuti shanduko iyi inouya kubva kuCupertino uye kunyangwe isu tisingazomboziva chikonzero cheizvi kusapfeka, Izvo zviri pachena ndezvekuti vashandisi havazoone kuderera uku mukuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyo nyowani A15 Bionic chip muiyo iPad mini inogumira musimba
Apple yatobvumidza kuwedzera AppleCare + kuSpain, France neItari